Xildhibaan Cosoble oo sheegay in xildhibaanno ka tisan Labada Gole ay usoo jeediyeen in loo magacaabo xilka Ra’iisul wasaare – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdulkhaadir Cosoble oo ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa sheegay in xildhibaanno ka tirsan labada Gole ee Baarlamaanka ay usoo jeediyeen, haddii la sameynayo Ra’iisul wasaare in isaga laga dhigo.
“Waxaan u mahadcelinayaa xildhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo habeen dhoweyd markii uu Guddoomiyaha Gobolka Banaadir uu cashada noo sameeyay ii soo jeediyay, haddii Ra’iisul wasaare la sameynayo, in anniga aan iyaga ku metelo, oo laga iga dhigo Ra’iisul Wasaare, kalsoonida ay i siiyeen waan uga mahadcelinayaa”.
Mudane Cosoble ayaa caddeeyay in haddii isaga la dhigo Ra’iisul wasaare ama qof kale loo magacaabo in mowqifkiisa uu yahay in doorashada ay ku dhacdo xiligeeda.
“Xukuumad kasta oo timaada xitaa haddii aan anniga Ra’iisul wasaare ka ahay, waxaan rabaa in doorashada ay ku dhacdo xiligeeda. Waxaan rabaa in degannaansha dalka la dhowro”, ayuu yiri.
25-kii bishii hore Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Baarlamaanka uu codka kalsoonida kala noqday Xukuumadda Xasan Cali Kheyre.
Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in 170 xilidhibaan ay u coddeeyeen in ay codka kalsoonida ah ay kala noqdeen xukuumadda, halka siddeed mudane ay diideen, waxaana uu sheegay in aysan jirin xildhibaanno ka aamusay codka kalsoonida.